သစ်မွှေး အပွင့်၊ အသီး၊ အကိုင်း၊ အစေ့ ၊ အရွက် ပုံစံများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » သစ်မွှေး အပွင့်၊ အသီး၊ အကိုင်း၊ အစေ့ ၊ အရွက် ပုံစံများ
သစ်မွှေး အပွင့်၊ အသီး၊ အကိုင်း၊ အစေ့ ၊ အရွက် ပုံစံများ
Posted by Wai Aung Chan Myo on Jun 21, 2012 in Know-How, DIY | 13 comments
ကဲအားလုံးပဲ မမြင်ဖူးမရှိရအောင် တင်ပေးလိုက်ပြီနော်
အစ်ကိုရေ အဆင်ပြေရင် အရွယ်ရောက်နေတဲ့ အပင်ကြီးတွေ တင်ပေးပါအုန်းနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော့်ဆီမှာရှိတဲ့ ၃နှစ်သားအပင်တချို့ကို တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။
ကျနော့်ဆီမှာရှိတဲ့ ၂နှစ်သားနဲ့ ၃နှစ်သား အပင်တချို့ကို တင်ပေးလိုက်တယ်နော်
အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ။ ပထမပို့စ်ကိုဝင်ကြည့်သေးတယ်။
တနေ့ကို post 2ခုပဲတင်ဆိုတော့ …
ကိုဝေအောင်ရဲ ့စေတနာကြောင့်မို ့၊ သစ်မွှေး ရဲ ့ပုံတွေ ကို ပထမဆုံးအကြိမ် မြင်ဖူးရပါတယ် ။
ကျနော် သစ်မွှေးကို စလေ့လာတုန်းက သစ်မွှေးလို့ google မှာရှာကြည့်တယ် မရသေးဘူး
သစ်မွှေးကို အင်္ဂလိပ်လို agarwood, aglewood, aloewood စသဖြင့် google မှာရှာကြည့်ရပါတယ်။
ဒါတောင် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ ကြော်ငြာသက်သက်ဖြစ်တဲ့ Web Site တွေပဲတွေ့တာများပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုလိုသစ်မွှေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဆောင်းပါးတွေ ရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို သစ်မွှေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ post တွေရေးခွင့်ရတဲ့အတွက် မန္တလေးဂေဇက် ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းထပ်လောင်းပြောပါရစေ။
ခြံလိပ်စာ- သန်လျင်-ကျောက်တန်းကားလမ်းမဘေး(ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဝင်းအနီး)၊ ပျဉ်ထောင်ချောင်းရွာ၊ နတ်စင်ကုန်း မှတ်တိုင် (ကျိုက်ခေါက်ဘုရားမှ ၆မှတ်တိုင်မြောက်) တွင်ဆင်း၍၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဂိတ်တွင် သစ်မွှေးခြံကို ပို့ပေးပါဆိုရင်……
Ph:	09 49348896, 09 73070035, 09 5136753, 09 49275907.
Agarwood is known under many names in different country. It is known as Chen Xiang 沉香，in China. In Europe it was referred to as eaglewood or Agilawood. The Indonesian and Malay, call it Gaharu. Agarwood is the heartwood produced by Aquilaria trees which has several different species. The resinous heartwood is fragrant and due to this reason it is highly valuable. Agarwood/Gaharu (沉香) is the most precious wood in the world. It is even called “Wood of Gods”.
Agarwood is the infected wood of the Aquilaria tree. When Aquilaria tree is damaged and infected with bacteria,aresin flow naturally from the tree to cover the wound,anatural defense mechanism of Aquilaria tree against infections. Agarwood is considered very rare as not all Aquilaria trees produce resin and it is extremely difficult (or even impossible) to judge from the outside of the tree whether or not it is infected. Only about 10% of wild mature Aquilaria tree can naturally form this resin.
Agarwood is usually found in deep forests and mountainous areas which are not accessible to humans. Agarwood application ranges from incense for religious ceremonies (China, Japan, Korea, Egypt, etc.), perfume for the Arabs, medicinal wine in Korea and wooden sculptures as natural art in China.
ကျေးဇူးပါ အခုလို Link တွေကို ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်
အပွင့်က စိမ်းစိမ်းလေး ထူးဆန်းတယ်။
သတ္တလောက သဘာဝလောကတခုလုံးဟာ အကုန်လုံးဆန်းကြယ်ကြပါတယ်
ဒါကြောင့်ပဲ မသိသူကြော်လွှား သိသူဖော်စားဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ အားလုံးသိရအောင် မချွင်းမချန် ဖော်ပြပေးချင်တာပါ။